Inona ny toro-hevitra SEO afaka manatsara ny toerana misy ny tranonkala ao Google?
Amin'izao fotoana izao, rehefa mandefa "toro-hevitra SEO" ao anaty boaty fikarohana ianao, dia hahazo valiny an'arivony tapakila izay mety hamaly ny fanontanianao. Na dia izany aza, betsaka ny fampahalalam-baovao diso momba ny soso-kevitry ny fikarohana. Satria ny tanjon'ny fanatontosana dia tena tadiavina, maro ny tsy matihanina no manapa-kevitra ny hanoratra lahatsoratra sy toro-làlana momba izany mba hisarihana mpampiasa maro kokoa amin'ny sehatra. Ataovy ao an-tsaina fa ny tolo-kevitry ny fanatsarana kalitao toy izany dia mety tsy mampifangaro ny tompona tranonkala ihany fa manimba ny toerana misy azy ihany koa.
Tsy tokony hatoky ireo lazaina fa "manam-pahaizana SEO" ianao raha tsy hoe tsy mitady fikarakarana mpanome tolotra maoderina - hosting christmas dinner. Amin'ity tranga ity ihany, manana traikefa sy fahalalana ampy izy ireo hanome torohevitra SEO anao. Ny iray amin'ireo olana goavana atrehin'ny mpiseraserana rehefa mitady ny tolo-kevitry SEO izy ireo dia tsy fantany izay fampahalalana ilainy mba hatokisana. Tena mampanahy azy io. Mila mandinika mandrakariva ny zavatra hitanao amin'ny aterineto ianao alohan'ny hanaiky izany ho toy ny fanentanana tsara. Amin'ity lahatsoratra ity, te hizara ny toro-làlana tsara indrindra momba ny fanatsarana ny fikarohana aho izay nanamarina ny zavatra niainako manokana.
Torohevitra ny SEO
fanentanana fanentanana, mila manao fanadihadiana momba ny varotra sy fikarohana ianao. Noho izany dia manomboka amin'ny fanaraha-maso ny tamba-jotra ho an'ny teny fototra mifandraika amin'ny tsenanao. Jereo avy eo ny valiny rehetra ao amin'ny pejy voalohany amin'ny Google, tsy miraharaha ny voka-pikarohana ao amin'ny TOP. Ny tranonkala rehetra napetraka eo amin'ny pejy SERP voalohany dia ny mpifaninana tsenanareo amin'ny tsenan'ny varotra. Hamarino ny tanjon'ny fampiroboroboana izay ampiasain'ireo mpifaninana aminao sy ny zavatra tsy hita. Aza matahotra mampindrana paikady handresy lahatra amin'ny tranokalanao ary mamorona tetikady ny fomba ahafahanao manosika ny mpifanandrina aminao.
Manangana lisitr'ireo teny fanalahidy.
Ny dingana manaraka aorian'ny fikarohana momba ny fifaninanana dia fikarohana lalindalina kokoa. Mila mifidy ny fepetra sy fehezary tianao hapetraka ny lahatsoratra hanehoana azy. Tokony ho ny manan-danja indrindra amin'ny fikarohana fikarohana momba ny orinasa izay mety ampiasain'ny mpanjifanao mitady ny vokatra na ny tolotra toy ny anao. Manoro hevitra anao aho mba hisoroka ny fehezanteny tena mifanentana amin'ny ankapobeny sy ny ankapobeny fa ny ankamaroany dia ampiasain'ireo sehatra taloha efa antitra. Izany no antony ilainao hisafidy teny fohy sy tsy dia mifanentana amin'ny fifaninanana izay afaka mitondra fifandraisana kalitao. Ny fomba tsotra indrindra ahafahana manolotra soso-kevitry ny teny fanalahidy dia mampiasa Google Keyword Planner na fitaovana hafa maimaim-poana maimaim-poana amin'ny aterineto.
Hamorona ny tsara indrindra
. Eto, hanandrana hanazava anao aho hoe nahoana. Ny votoaty no lafiny manan-danja indrindra amin'ny SEO izay tsy mitaky fahaizana teknika. Ny votoatin'ny tranonkala no zavatra voalohany hitan'ny mpampiasa rehefa manokatra ny tranokalanao izy ireo. Raha lazaina amin'ny teny hafa, izy io dia singa fanadiovana môtepika izay mamorona tsindrona voalohany. Izany no mahatonga ny votoaty tokony ho, aloha indrindra, manan-danja indrindra amin'ny tsenan'ny varinao. Faharoa, tokony ho tokana izy io satria tsy misy teboka mamerina ny fampahalalam-baovao efa nipetrahanao. Fahatelo, hevitra saro-pady ny manoratra amin'ny lohahevitra izay mety ho liana amin'ny mpampiasa. Mba hanatsarana ny fahatsiarovanao ny marika sy ny lazanao an-tserasera, ianao dia tokony ho manam-pahaizana amin'ny orinasanao ary hizara amin'ny mpanjifa toy izany sy ny fampahalalana tsy manam-paharoa tsy hahita toerana hafa. Ataovy azo antoka fa mifanentana tsara amin'ny votoatin'ny mpanjifa ny votoatiny rehetra.